Xildhibaan Farxiyo Muumin “Waxaan ka xumahay in aan ilaa hadda lagu bixin falkii lagu laayay Carruurta iyo Haweenka ee Gobalka Hiiraan” – Kalfadhi
May 7, 2019 Kalfadhi
Xildhibaan Farxiyo Muumin Cali oo katirsan xubnaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa muujisay walaaca ay ka qabto Carruur iyo Haween maalmo ka hor lagu dilay degaan katirsan degmada Maxaas ee Gobalka Hiiraan.
Farxiyo Muumin ayaa sheegtay in dil wadareed loo geestay Hooyo iyo Carruurteeda oo ka hayaamay biyo la’aan kuwaas oo u socday degaan naq ka jiro oo ay ka da’een roob aan badneen, waxaana dadka la dilay ku sheegtay ilaa 7 ruux oo 5 kamid ah Carruur yihiin.
Xildhibaan Farxiyo ayaa sheegtay in ay ka walaacsan tahay in ilaa hadda aysan jirin cid ku baxday arintaasi oo laga cabsi qabo in ay dhaliso dhibaato kale oo intaan ka ballaaran maadaama degaanka uu yahay degaan ay muddo ka taagneed dagaal beeleed dhaliyay khasaare badan.
“Waxaan ka xumahay in aan ilaa hadda lagu bixin dadkii lagu laayay degmada Maxaas ee Marasta ahaa, waxaana ka cabsi qabaa in dhibka uu intaan ka bato maadaama degaanka ay hore uga jirtay degaal beeleedyo arintaana ay xariir la leedahay dagaaladaasi” ayey u sheegtay Kalfadhi Xildhibaan Farxiyo Muumin Cali oo katirsan Xildhibaanada laga soo doortay Gobalka Hiiraan.
“Odayaasha dhaqanka iyo Culumada waxaan ugu baaqayaa in ay arintaan wax ka qabtaan oo ku baxaan, qof kasta oo wax ka gasha waxaan ku talinayaa in aan la isku fiirsan dhibaatada aadka u xun” ayey tiri Farxiyo Muumin Cali oo la hadashay Kalfadhi.
Dhinaca kale waxay Madaxweynayaasha Galmudug iyo HirShabeelle ay ka dalbatay in ay waqti badan geliyaan sidii loo dhamayn colaad beeleedka ka taagan degaanada ku yaala Xuduuda Galmudug iyo HirShabeelle, colaadaas oo soo laa-laabatay sanado badan.
“Madaxweyne Xaaf iyo Madaxweyne Waare waxaan ka dalbanayaa in waqtigooda ugu wayn ay geliyaan sidii loo dhamayn colaadda degaanka si loo badbaadiyo dadka Marasta ah” ayey tiri Xildhibaan Farxiyo Muumin Cali oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
“Shacabka reer Beladweyne waxaan ka dalbanayaa in aysan ka jawaab celin arintaan oo aan dhibaateynin qoysas kale oo Maras ah” ayey hadalkeeda ku soo gaba-gabeysay Xildhibaan Farxiyo Muumin Cali oo wareysi siiyay Kalfadhi.
Kulankii golaha shacabka BFS ee maanta oo u baaqday kooram la’aan